Waxaan ogaanay sababta sababta geedo ka mid ah basbaaska hoos u dhaco, waxa la sameeyo kiiskan, bixiyaan gargaarka koowaad
Walnut cawl: korriin, waxa ka duwan lowska Manchurian
Cuntooyinka ugu waxtarka leh ee isku darka lebbiska iyo liinta miisaan lumis iyo talooyin ku saabsan sida loo qaato
Spinach waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dhirta ugu wax ku oolka badan. Waxay ka kooban tahay waxyaabo badan oo waxtar leh, iyo inaad u koraan naftaada ma aha mid aad u adag. Kadib, qof kastaa wuxuu rabaa in uu naftiisa iyo kuwa ay jecel yihiin u jecel yahiin maaha oo keliya, laakiin sidoo kale cunto caafimaad leh. Dhammaan khudradda beerta, isbinaajka, ee ku jirta borotiinka, waxay siinaysaa kaliya cagaar cagaaran iyo jilicsanaanta cagaaran. Read More
Xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka caafimaadka ee tuboonta. Hoos u dhaca guriga iyo berrinka bannaan